Chrome 76 inodzivirira mawebhusaiti kubva mukuona vashandisi mune incognito mode | Linux Vakapindwa muropa
Google yakazivisa shanduko mune incognito modhi maitiro en iyo inotevera kuvhura kwe browser yako Chrome 76 iyo yakarongerwa Chikunguru 30. Kunyanya Google inogoverana kuti mukana wekushandisa bug iyo yaishandiswa nemawebhusaiti mukuitwa kweiyo faira system API ichavharwa, iyo inobvumidza kuona kana mushandisi ari incognito kana uchishandisa webhu kunyorera kubva kune webhu kunyorera.
Iwo mawebhusaiti aifanira kungoedza kushandisa iyo faira system API iyo inoshandiswa kuchengetera kwenguva pfupi kana zvachose mafaira.
Chrome's incognito mode inoenderana nesisitimu yekuti iwe unofanirwa kuve nesarudzo yekutarisa pawebhu zvakavanzika.
Iyi API yakaremara mune incognito modhi, asi yaive iripo zvakajairwa modhi. Izvi zvakagadzira chinzvimbo musiyano unoshandiswa kuona kana mushandisi aivhura webhusaiti achishandisa incognito modhi uye achivatadzisa kuona izvo zviri saiti.
Kana iri incognito mode, iyo API yakaremara kuitira kuti vanhu varege kusiya zvinoitwa zvechiitiko. Iwo mawebhusaiti anga achitarisa kuwanikwa kweAPI uye kana vasingakwanise kuiwana, vanoona kuti Incognito Mode yakavhurwa.
Iyi danho inogona kufadza vanhu vane hanya nekuti zvakavanzika mabhurawuza nzira dziri kurasikirwa nekumwe kukosha kwazvo
Mune remangwana vhezheni ye Chrome, kuwana iyo systemystem API haizovharwe, asi zvirimo zvinodzimwa mushure mekunge chikamu chapera.
Tinoda kuti iwe ugone kuwana iyo webhu zvakavanzika, uine vimbiso yekuti sarudzo yako yekuita yakadaro zvakare yakavanzika. Aya mazano anowirirana neiri kubuda webhu zviyero zveyakavanzika mabhurawuza modhi.
Saizvozvowo, mamwe masaiti anoshanda pasi peiyo modhi kupa mukana uzere wekubhadharwa kwakabhadharwa (paywall), asi kusvika pamuganho wekugona kuona zvinyorwa zvizere zvezvinyorwa, ipa vashandisi vatsva kuzara kwedemo kuwana kweimwe nguva.
Pakupera kwaJuly, Chrome ichagadzirisa nzvimbo yakatendera nzvimbo kuona vanhu vachivhura incognito mode. Izvi zvinokanganisa vamwe vaparidzi vakashandisa gaka kudzora kuyerwa kwepaywall kudzivirirwa, saka tinoda kutsanangura mamiriro uye mamiriro eshanduko.
Nekudaro, iyo iri nyore nzira yekuwana yakabhadharwa zvemukati pane akadai masisitimu ndeye kushandisa incognito modhi.
Vapepeti havagutsikane nehunhu uhu, saka munguva pfupi yapfuura vanga vachishingairira kushandisa nzvimbo ine hukama neiyo FileSystem API kuvharira kupinda kune saiti kana vamisa incognito modhi uye kuratidza chikumbiro chekumisa iyi modhi kuti varambe vakatarisa.
Google yakawedzera kuti vaparidzi vanofanirwa kuongorora mhedzisiro yeiyo FileSystem API yekudzokorora vasati vaita shanduko kumawebhusaiti avo.
Kutanga ne Chrome 76, masaiti haazokwanisa kuona kana bhurawuza iri mune yakajairwa modhi kana incognito modhi. Kunyangwe izvi zvisinga vimbise kuti masayiti haazokanganisa zvimwe zvipingamupinyi zvevashandisi vanovashanyira vachishandisa Incognito Mode, zvinoita zvishoma kugadzirisa iko nyore kuona kweyakavanzika nzira yekubhurawuza.
Saiti dzinogona kukurudzira vashandisi kuti vapinde mukati zvisinei kuti ndevemodii, asi ivo havachagone kusarudza vashandisi vachishandisa Incognito Mode.
Chrome 76 inotarisirwa muna Chikunguru 30, 2019, iyo iyi vhezheni yebrowser ichaunza iyi uye nedzimwe shanduko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chrome 76 inodzivirira mawebhusaiti kubva mukuona vashandisi mune incognito modhi